Ibhulogi yezindaba kusukela ku-Reward Foundation: Uthando, Ubulili kanye ne-Intanethi
Ikhaya Ibhulogi yezindaba
i-adminacount888 1st March 2021 Izindaba zakamuva
Le bhulogi yezivakashi kaJohn Carr, ongomunye weziphathimandla ezihola phambili ekusetshenzisweni kwezingane nentsha i-intanethi nobuchwepheshe obusha obuhambisana nabo. Kuyo ubeka umthelela ongahle ube khona (owonakalisayo) wesiphakamiso se-Facebook sokubethela…
Uhlu Lokuphakathi Ukubuka Kwesifo Sezingcuphe Zobulili I-Autism Spectrum Disorders Ebusheni Amavidiyo Amfishane Ekuvikeleni Izingane Idokhumentari Entsha Yabazali Yabazali Ngemiphumela Yezocansi Ezinganeni Ezisizayo ngalezo zingxoxo ezinzima Amathiphu aphezulu okukhuluma nezingane…
i-adminacount888 I-14th February ngo-2021 Izindaba zakamuva
“Uthando? Impicabadala. ” Kepha enye yezindlela zokusiza ekuqinisekiseni ukuthi ukuqonda izilimi ezinhlanu zothando. Sebenzisa leli thuluzi lobudlelwano ukwenza ngcono impilo yakho yothando. USuzi Brown, umeluleki wezemfundo weReward Foundation, uchaza ngezansi ukuthi singakwenza kanjani…
i-adminacount888 I-9th February ngo-2021 Izindaba zakamuva
Udaba lokuhlukunyezwa kwabesifazane namantombazane emphakathini wanamuhla lubucayi impela. Izibalo zodlame lwasekhaya, ukuklinywa ngokocansi okungabulali nokubulalayo kanye nokuhlukunyezwa okuvamile kwezocansi kuyaqhubeka nokukhuphuka ngezinga elishaqisayo, ikakhulukazi ekuvalekeni. Okubili muva nje…
i-adminacount888 I-12th NgoDisemba 2020 Izindaba zakamuva
Kube nenkulumo eningi eminyakeni yamuva mayelana nokuthi ukusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana (i-SMU) kuxhumene nokudangala. Lolu cwaningo olusha kwi-American Journal of Preventive Medicine lukhombisa ukuthi kungenzeka. Sibheka ukusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana…
i-adminacount888 I-4th NgoDisemba 2020 Izindaba zakamuva
“Imvamisa lapho ngisebenza nemindeni, ngiqala ngokuxoxa ngemithelela yomzimba yesikhathi sesikrini. Isikhathi sesikrini sihumusha kanjani sibe yizimpawu ezithile, nokuthi ukusebenzisa i-elekthronikhi okusheshayo (noma ukuvala isikrini ngokushesha) kungasiza kanjani ukusetha kabusha ubuchopho futhi kucacise okwenzekayo. …
i-adminacount888 I-19th ngo-November 2020 Izindaba zakamuva
Uthando namandla okuphulukisa okuthinta kubalulekile enhlalakahleni yethu ngoba kusenza sizizwe siphephile, sinakekelwa futhi singacindezelekile. Wagcina nini ukuthintwa? Ukuthola kabanzi, i-BBC yenza ucwaningo olubizwa nge-The Touch Test ngalokhu…
i-adminacount888 I-XNUMi-Okthoba i-16 Izindaba zakamuva
"Kuzo zonke izinto ezenziwa kwi-intanethi, i-porn inamandla amakhulu okuba umlutha," kusho ososayensi bezinzwa baseDashi uMerkerk et al. Uma ungekho umthetho wokuqinisekisa iminyaka nobungozi bokuqhubeka nokuvaleka lapho izingane zibophezeleka ukufinyelela kumasayithi ezithombe zocansi ngokukhululeka,…
i-adminacount888 I-11th Septhemba 2020 Izindaba zakamuva
Kushaqisile ukuzwa intombazane yesikole eneminyaka engu-14 ubudala isitshela ukuthi “isiyi-kink”. Sasiphambi kwabanye abantu abasha abangama-20 enkulumweni mayelana nezingozi ezingaba khona ezungeze i-inthanethi ye-porn. Lokho bekuvele kuyiminyaka emithathu…
i-adminacount888 I-20th July ngo-2020 Izindaba zakamuva
I-Reward Foundation ichithe ihlobo isebenza noJohn Carr, OBE, Unobhala Wenhlangano Yezingane Yezinhlangano Ezisiza Abantulayo ngokuphepha kwe-Intanethi, ukukhiqiza ingqungquthela yokuqala ye-Age Verification Virtual yezithombe zocansi. Kwenzeka ngoJuni 2020. Lo mcimbi wawuhlanganisa…
Ikhasinkomba 1 of 14